ရွှေကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ရှာတွေ့နိုင်လဲ ရွှေရှာပြီးတော့ သန်းကြွယ်သူဌေး လုပ်ကြရအောင်…ဆိုတဲ့ သူဌေးဖြစ်နည်း – ThuThuLay
ရွှေကိုစင်ကြယ်သောဇာတိရှိတဲ့ဒြပ်စင်အဖြစ်တွေ့ရှိရ တာဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဟာတိုက်စားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ တစ်ခုတည်းသော သတ္ထုပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ရွှေဟာအလေးချိန်များတာကြောင့် သူ့ကိုဆိုရင် စမ်းချောင်းတွေရဲ့အောက်ခြေတွေမှာသာမက ပင်လယ်တွေနဲ့ နုန်းမြေ ဖြစ်ပေါ်ရာ နေရာတွေမှာတွေ့ရှိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ငလျှင်လှုပ်ခြင်းကလည်း အလားတူ ရွှေများ ကို ထွက်ပေါ် လာစေပါတယ်။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ငလျင် လှုပ်ခြင်းဟာ ဓာတ်သတ္ထု ကြွယ်ဝတဲ့ရေကို ဖိနှိပ် ထားရာကနေ လျှင်မြန်စွာ လွှတ်လိုက်ရတာကြောင့် ရေဟာ အငွေ့ပျံသွား တဲ့အခါ ရွှေပါဝင်တဲ့ အလွှာများဟာ ကျောက်မျက်နှာပြင် များပေါ် ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
မီး တောင်များ အတွင်း၌လည်း အလားတူ ဖြစ်စဉ်ကို တွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ရွှေကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လဲ? သဘာဝ အလျေက်ရွှေဆိုတာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ?ရွှေကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လဲ?ရွှေဟာ ဘယ်လိုမျိုး ထွက်ပေါ်လာခဲ့ တာလဲ? ရွှေဆိုတာကတော့ ဓာတု သဘာဝ အတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဒြပ်စင်တစ်ခုပင်ဖြစ်ပြီး အဝါရောင် တောက်ပတဲ့ သတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက် အလွယ် တကူပင် သိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဟာ သူ့ရဲ့ရှားပါးမှု၊ တိုက်စားမှုကိုခံနိုင်ရည်ရှိမှု၊ လျှပ်ကူးနိုင်မှု၊ အလွယ်တကူ ပုံသွင်းနိုင်မှုအ ပြင် သူ့ရဲ့လှပတဲ့ရွှေရောင် ရှိမှုကြောင့် အလွန်ပင်အဖိုးတန်တဲ့ သတ္ထုပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေကို ဘယ်လိုနေရာတွေကနေ ရနိုင်ပါသလဲ ဆိုရင်တော့ မိုင်းတွင်းတွေကနေ ဒါမှမဟုတ် စမ်းချောင်းတွေကနေ ရွှေကျင်ခြင်း ကနေ ရရှိ နိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တကယ်စင်စစ် ရွှေထွက်ရှိတဲ့ မူလ အရင်းအမြစ်ကတော့ ကမ္ဘာမြေကြီးပဲ ဖြစ်တာကတော့ မလွဲဧကန် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်က ရွှေတွေဟာဆိုရင် ကောင်းကင်ပေါ်ကကြယ်တွေကြွေလာတဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အစိုင်အခဲတွေက ထွက်ပေါ် လာတယ် ဆိုတာကို ယုံကြပါသလား? ကမ္ဘာကြီး ဖြစ်ပေါ်လာပြီးနောက်မှာ လေးလံတဲ့သတ္ထုတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ iron (သံ)နဲ့ gold(ရွှေ) တို့ ဟာ ကမ္ဘာ့မြေကြီးရဲ့ အတွင်း ဗဟိုဒေသကို စိမ့်ဝင် သွားကြပါတယ်။
တကယ်လို့ ဒီလို အဖြစ်အပျက်မျိုးသာ မရှိခဲ့ပြီး ဆိုရင် ရွှေဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်က အစိုင်အခဲတွေထဲမှာ ထွက်ပေါ်ခြင်း ရှိလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွန်လေပြီးသော နှစ်ပေါင်း သန်းလေးထောင် လောက်က ကမ္ဘာ့ကြီးဟာ asteroid (အဲ့စ်တရွိုက်ဒ်=အင်္ဂါဂြိုဟ်နှင့်ဂျူပီတာကြား လမ်း ကြောင်းမှ နေကိုပတ်နေသော ဂြိုဟ်ငယ်တစ်ခု) ရဲ့သက်ရောက်မှုတွေနဲ့ ထိုးနှက်ခြင်း ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ့ သက်ရောက်မှုတွေဟာ ကမ္ဘာ့ မြေကြီးရဲ့ နက်ရှိုင်းတဲ့ အလွှာတွေကို လှုံ့ဆော် ပေးခဲ့တာကြောင့် ရွှေအချို့ကို ကမ္ဘာ့မြေကြီးရဲ့ အပေါ်ဆုံး အလွှာနဲ့ အလယ်ဗဟို ကြားနေရာရှိ အလွှာတွေဆီ ရေ က်ရှိ စေခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အချို့သော ရွှေများကိုတော့ ကျောက် ရိုင်း သတ္ထုရိုင်းများနဲ့ အ တူပင်တွေ့ရှိ ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှကေိုစငျကွယျသောဇာတိရှိတဲ့ဒွပျစငျအဖွဈတှရှေိ့ရ တာဖွဈပါတယျ။ ရှဟောတိုကျစားမှုကိုခံနိုငျရညျရှိတဲ့ တဈခုတညျးသော သတ်ထုပဲဖွဈ ပါတယျ။ ဒါ့အပွငျရှဟောအလေးခြိနျမြားတာကွောငျ့ သူ့ကိုဆိုရငျ စမျးခြောငျးတှရေဲ့အောကျခွတှေမှောသာမက ပငျလယျတှနေဲ့ နုနျးမွေ ဖွဈပျေါရာ နရောတှမှောတှရှေိ့နိုငျတာဖွဈပါတယျ။ငလြှငျလှုပျခွငျးကလညျး အလားတူ ရှမြေား ကို ထှကျပျေါ လာစပေါတယျ။ ဘာလို့ လဲ ဆိုတော့ ငလငျြ လှုပျခွငျးဟာ ဓာတျသတ်ထု ကွှယျဝတဲ့ရကေို ဖိနှိပျ ထားရာကနေ လြှငျမွနျစှာ လှတျလိုကျရတာကွောငျ့ ရဟော အငှပြေံ့သှား တဲ့အခါ ရှပေါဝငျတဲ့ အလှာမြားဟာ ကြောကျမကျြနှာပွငျ မြားပျေါ ရောကျရှိလာတာ ဖွဈပါတယျ။
မီး တောငျမြား အတှငျး၌လညျး အလားတူ ဖွဈစဉျကို တှရှေိ့ရတာဖွဈပါတယျ။ရှကေို ဘယျလိုနရောတှမှော ရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျလဲ? သဘာဝ အလကျြေရှဆေိုတာ ဘယျလိုဖွဈပျေါလာတာလဲ?ရှကေို ဘယျလိုနရောတှမှောရှာဖှတှေရှေိ့နိုငျလဲ?ရှဟော ဘယျလိုမြိုး ထှကျပျေါလာခဲ့ တာလဲ? ရှဆေိုတာကတော့ ဓာတု သဘာဝ အတိုငျးဖွဈပျေါလာတဲ့ ဒွပျစငျတဈခုပငျဖွဈပွီး အဝါရောငျ တောကျပတဲ့ သတ်ထုဖွဈတဲ့အတှကျ အလှယျ တကူပငျ သိနိုငျမှာပဲဖွဈပါတယျ။ ရှဟော သူ့ရဲ့ရှားပါးမှု၊ တိုကျစားမှုကိုခံနိုငျရညျရှိမှု၊ လြှပျကူးနိုငျမှု၊ အလှယျတကူ ပုံသှငျးနိုငျမှုအ ပွငျ သူ့ရဲ့လှပတဲ့ရှရေောငျ ရှိမှုကွောငျ့ အလှနျပငျအဖိုးတနျတဲ့ သတ်ထုပဲဖွဈပါတယျ။
ရှကေို ဘယျလိုနရောတှကေနေ ရနိုငျပါသလဲ ဆိုရငျတော့ မိုငျးတှငျးတှကေနေ ဒါမှမဟုတျ စမျးခြောငျးတှကေနေ ရှကေငျြခွငျး ကနေ ရရှိ နိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့လညျး တကယျစငျစဈ ရှထှေကျရှိတဲ့ မူလ အရငျးအမွဈကတော့ ကမ်ဘာမွကွေီးပဲ ဖွဈတာကတော့ မလှဲဧကနျ ပဲဖွဈပါတယျ။ ကမ်ဘာပျေါက ရှတှေဟောဆိုရငျ ကောငျးကငျပျေါကကွယျတှကွှေလောတဲ့အခါ ဖွဈပျေါလာတဲ့ အစိုငျအခဲတှကေ ထှကျပျေါ လာတယျ ဆိုတာကို ယုံကွပါသလား? ကမ်ဘာကွီး ဖွဈပျေါလာပွီးနောကျမှာ လေးလံတဲ့သတ်ထုတှေ ဖွဈကွတဲ့ iron (သံ)နဲ့ gold(ရှေ) တို့ ဟာ ကမ်ဘာ့မွကွေီးရဲ့ အတှငျး ဗဟိုဒသေကို စိမျ့ဝငျ သှားကွပါတယျ။
တကယျလို့ ဒီလို အဖွဈအပကျြမြိုးသာ မရှိခဲ့ပွီး ဆိုရငျ ရှဆေိုတာ ကမ်ဘာပျေါက အစိုငျအခဲတှထေဲမှာ ထှကျပျေါခွငျး ရှိလာမှာ မဟုတျပါဘူး။ လှနျလပွေီးသော နှဈပေါငျး သနျးလေးထောငျ လောကျက ကမ်ဘာ့ကွီးဟာ asteroid (အဲ့ဈတရှိုကျဒျ=အင်ျဂါဂွိုဟျနှငျ့ဂြူပီတာကွား လမျး ကွောငျးမှ နကေိုပတျနသေော ဂွိုဟျငယျတဈခု) ရဲ့သကျရောကျမှုတှနေဲ့ ထိုးနှကျခွငျး ခံခဲ့ရတာဖွဈပါတယျ အဲ့ဒီ့ သကျရောကျမှုတှဟော ကမ်ဘာ့ မွကွေီးရဲ့ နကျရှိုငျးတဲ့ အလှာတှကေို လှုံ့ဆျော ပေးခဲ့တာကွောငျ့ ရှအေခြို့ကို ကမ်ဘာ့မွကွေီးရဲ့ အပျေါဆုံး အလှာနဲ့ အလယျဗဟို ကွားနရောရှိ အလှာတှဆေီ ရေ ကျရှိ စခေဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။ အခြို့သော ရှမြေားကိုတော့ ကြောကျ ရိုငျး သတ်ထုရိုငျးမြားနဲ့ အ တူပငျတှရှေိ့ ရတာပဲဖွဈပါတယျ။
NLD ပါတီ တံဆိပ် ပါ MASK များတပ်ဆင် ခဲ့သည့် ရဲ အရာရှိ (၃) ဦး နယ် ပြောင်းရွှေ့ အရေးယူ ခံရ
သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ် ကိုက်နေတဲ့ ဖိလစ်ပိုင် သမ္မတနှင့် ကိုဗစ်ကာလ ကျောင်းလုံးဝမဖွင့်ရေး အစီအစဉ်